WedzeraShoppers: Yemagariro Commerce Mapuratifomu Martech Zone
WedzeraShoppers maapplication anobatsira iwe kuwedzera mari yemagariro, wedzera kugovana mabhatani uye nekukupa iwe analytics pamusoro pekuti magariro ari kukanganisa sei kutengeserana. AddShoppers inobatsira ecommerce vanopa kuti vawedzere vezvenhau kuti vawedzere kutengesa. Mabhatani avo ekugovana, mibairo yemagariro, uye zvekutenga zvekugovana maapplication zvinokubatsira iwe kuti uwane mamwe masocial share ayo anogona kuzoshanduka ave ekushambadzira munharaunda. WedzeraShoppers analytics kukubatsira iwe kuteedzera kudzoka kwako mukudyara uye unzwisise kuti ndedzipi nzira dzemagariro dzinoshandura.
WedzeraShoppers inowedzera kubatanidzwa kwevatengi nekubatanidza kukwidziridzwa munharaunda nemagariro ekugovana munharaunda. Pamusoro pekuwedzera kubatanidzwa, kusangana kwemagariro coupon kukwidziridzwa uye kugovana munharaunda kunobatsira kudzikisa ngoro yekutengera uye kuwedzera mitengo yekutendeuka.
Zvirongwa zvinoita chitoro chako chepamhepo kugarisana
Smart Yemagariro Midhiya Mabhatani ita kuti zvive nyore kuwedzera yako traffic uye kutengesa kubva kune eruzhinji kutumira. Mabhatani avo ekugovana anogonesa nyore chigadzirwa kugovana kune vatengi vako kuti vagone kugovana zvigadzirwa zvavanofarira kune avo avanofarira masocial network.
Mibairo Yemagariro inokubatsira iwe kuwedzera kugovana kwechigadzirwa chemagariro nekugadzira chirongwa chekuendesa munharaunda kuburikidza nekukurudzira kugovana kwekushandisa bhatani. Ichi chishandiso chinobatsirawo kuwedzera kutendeuka kwemitengo nekudzora ngoro yekutengera kusiiwa pane koponi bhokisi.
Zvemagariro Ongororo inokubatsira kuti unzwisise mashandiro echitoro chako nekuteedzera zvese zvekugovana zvinoitika kubva kuchitoro chako. Iwe unogona kuona kuti kangani chigadzirwa chimwe chakagoverwa, ndiani akagovana, kangani kudzvanya yega yega share yakadzvanywa, uye zvimwe zvakawanda.
Yemagariro ROI Kutevera inobatsira iwe kuti unzwisise kukosha kwezviitiko zvemagariro kuchitoro chako. Uchishandisa iyi purogiramu, unogona kuyera kukosha kweKakafanana, Tweet, Pin, uye mamwe maitiro ehukama.
AddShoppers Kutenga Kugovana inobatsira vatengi vako kugovana zvavanotenga neshamwari dzavo.
Discovery Wall (Pro) app inoita kuti zvive nyore kuwedzera rusvingo rwezvinhu zvako zvemagariro pasiti yako. Bvumira vatengi vako kuti vawane zvigadzirwa sezvavanoteedzera mune chaiyo-nguva padandemutande rewebhu.
Yemagariro Shopper Kupinda (Pro) inovhara musiyano uripakati pe social login uye eCommerce login. Kurwisa kutendeuka-kuuraya mafomu ekunyoresa nekugonesa isina musono kusaina kune ako vatengi vane pre-yakazadzwa minda. Pfumisa yako dataset yemutengi nehukama zvinhu.
WedzeraShoppers inotyaira pamusoro pe $ 1,000,000 XNUMX XNUMX pamwedzi mukutengesa munharaunda. Ivo vanogonesa zvakapfuma, zvakajairwa zvemagariro zvekuita data kuburikidza nemaAPIs uye inopa zvakadzama nzwisiso kune vanokurudzira. Yadzo yakavharika loop ROI chikuva inobvumira vatsigiri kuti vagovane nguva, kupi, uye maitiro avanoda uye ivo vanogonesa akawanda mazinga ekubatanidza uye kukwidziridzwa kutyaira mutengi kukurudzira.
WedzeraShoppers parizvino yakagadzira kusangana pamwe neKlout, Wishpot, RJ, Metrics, Rapleaf, Bronto, Google, Analytics, MailChimp, SilverPop, Vertical, Response, ExactTarget, Yakasimba, Tsamba, Listrak, WordPress, Accenture, Omniture, Site, Catalyst, Xing, LinkedIn , tumblr, Kaboodle, Polyvore, StumbleUpon, Google+, Twitter, Pinterest, NetSuite, Zoho, Salesforce, hubspot, pardot, Marketo, eloqua, Act-On, Tagman, tealium, ensighten, google, tag, maneja, openbravo, openerp, sap , connect-address, coremetrics, brighttag, CubeYou, Emma, ​​Marketing, Piwik, Wish, Wanelo, Webimax, Adobe, Dutu, Tag, Manager, Lexity, Webtrends, Epicor, Sage, ERP, Oracle, JD, Edwards, Microsoft, Dynamics , GP, SAP, Bhizinesi, Imwe, IBS, Enterprise, Intacct, Svpply, Responsys, uye CheetahMail.
Tags: AccentureChiito-OnaddshopperskupiswaAnalyticsChiedzaBrontobhizimisiCatalystCheetahMailbatanidza-kerocoremetricsCubeYouDynamicsecommerce yemagariro chikuvaEdwardseloquaEmmaensightenEnterpriseEpicorERPchaizvoGoogle +GPhubspotIBSKusagadzikanaJDKaboodlekloutlexityLinkedInListraktsambamailchimpmenejaMarketingmarketometricsMicrosoftnetsuiteomnitureOnekuvhuraOpenERPpangatauraruregereroPinterestPiwikPolyvorerapleafResponsemhinduroRJriparariresalesforcesapSilverPopSitezvekutengeseranadutusimbachigumbusoSvpplyTagtagmanTealiumtumblrTwittermiraWaneloWebimaxzvideoWishWishpotWordPressXingZoho